Ongororo yekubatsira Canonical kuvandudza Ubuntu 20.04 | Linux Vakapindwa muropa
Canonical inoparidzira ongororo kwatiri kuti ikubatsire iwe kuvandudza Ubuntu 20.04 Focal Fossa
Mumwedzi inopfuura mina, Canonical ichaburitsa vhezheni nyowani yesisitimu yayo yekushandisa. Kuva nehurongwa hutsva hwekushanda mukati memwedzi mitanhatu kwese kwakajairika, asi izvo zvisina kujairika ndechekuti kambani inomhanya naMark Shuttleworth inoburitsa Ongororo kuziva kuti vashandisi vanoda chii. Iri remibvunzo rakaburitswa nhasi uye ndinofunga zvakakodzera kutora chikamu nekuti zvinotora nguva shoma uye zvinogona kubatsira zvakanyanya.
Ongororo inovavarira kugadzirisa kana kuvhenekera nzira yekusimudzira ye Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa. Muchokwadi, mubvunzo wechipiri, wekutanga chinhu chatinogona kuzadza nekupinda mameseji, unotibvunza kuti "Tingaite sei kuvandudza Ubuntu", uko, semuenzaniso, isu tinokwanisa kuwedzera kuti vanogadzirisa dambudziko re GNOME izvo hazvitibvumidze kudhonza zvinyorwa kubva / kudesktop (wega maonero). Chinangwa cheCanonical ndechekuziva chatinoda nezve ayo mashandiro, asiwo zvatisingade nezvazvo.
Iyo ongororo ichabatsira kuvandudza Ubuntu 20.04 LTS
Dambudziko neiyi Ubuntu 20.04 ongororo ndeyekuti Inongowanikwa muChirungu. Ehezve, neruzivo rwekutanga, kurizadza kuchatibhadharira nguva shoma pane maminetsi gumi avanotivimbisa pane iro hombe peji.
Pakati pemibvunzo, isu tinoshandisa nzira yatinoshandisa, yatinoshandisa, kana tichiziva chero software yekuteedzera uye vaigona sei kuvandudza mashandiro. Kune zvakare chikamu umo mavanotibvunza isu masystem anoshanda atinoshandisa uye nei, kwatinogona (kana zvirizvo) kuwedzera Windows yechinhu chinowirirana. Uye ndezvekuti, kunyangwe isu tisingazvifarire, pane zvinhu zvakakosha kuita muchirongwa cheMicrosoft.
Vashandisi vanofarira kutora iyi ongororo vanogona kuiwana kubva Iyi link kubva kuGoogle Docs. Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa ichavhurwa zviri pamutemo musi waApril 23 uye iyi ongororo ichavhurwa kusvika Ndira 10.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Canonical inoparidzira ongororo kwatiri kuti ikubatsire iwe kuvandudza Ubuntu 20.04 Focal Fossa
Ini ndinofunga icho chimwe chinhu chekuvandudza ndiyo File Manager (faira maneja). Basa rekutsvaga rakangwara rinoshaikwa, uko mushandisi anogona zvakasiyana kupa zviyeuchidzo zvekufaira mazita uye zvemukati zvemafaira pamwe nekupa mitsara yemazuva. MuNautilus, semuenzaniso, kana iwe ukatsvaga mifananidzo ne .jpg, kana iko kutsva kwapera haugone kuronga nezuva, zita kana chero imwe ikholamu. Iwo marongero ekuratidzwa kwemakoramu akagadzwa, semuenzaniso iro datu damba harigone kuiswa pamberi pemuridzi. Chikamu chekupembedza chinotyisa, iwo mazuva anoonekwa kuruboshwe pamucheto wehwindo. Kutaura chokwadi semushandisi hazvifadze kushandisa Nautilus. Mate Bhokisi rinonyanya kushanda asi harisi iro desktop rakasarudzika. Izvo zvingave zvakare zviri nyore kwazvo kana Nautilus akawedzera iyo faira yekumanikidza mabasa, kusanganisira sarudzo senge dziviriro ye password.
Handina kumbobvira ndada kushandisa Ubuntu, uye ini handitombodi Debian. Asi ini ndinonyatsoda kushandisa kwake kweruvara rweorenji uye mune ongororo ini ndaizokumbira "yakawanda orenji."
Kunetsekana kwakawanikwa muApple iyo inoita kuti zvikumbiro zvakashata zvionekwe zviri pamutemo
W3C yakaita WebAssembly muyero unokurudzirwa